Date My Pet » 3 Soso-kevitra lehibe namoronany an'i Best Online Dating Profile
Last nohavaozina: Oct. 20 2020 | 2 min namaky
Ankehitriny, mampiaraka an-tserasera no nanjary be mpitia. Ary raha ny hevitrao momba izany, manao izany anefa. Fandaharam-potoana sy ny asa somebiseby erỳ be atao fiainantsika manokana fotoana kely miala tena hihaona olona efa nilaozan'ny toetrandro ny fomba. Fa fiarahana anaty aterineto dia mora anefa ilay izy. Ny fanalahidin 'ny fahombiazana dia miankina mampiaraka an-tserasera ao amin'ny mombamomba azy.
Profile sary - Ity sary ity no mamaritra ny sehatra. Ary aoka ny ho marin-toetra, dia mety ho fifanarahana mpandika ho an'ny sasany. Na izany na tsy hiaiky, fifanintonana ara-batana mitendry anjara lehibe an'ilay ho vadiny mantsy. Mifidy ny sary fa ny tsara indrindra dia manapariaka fananan'ny nefa tsy mampihanjahanja loatra. Koa, ho azo antoka mitsiky ianao eo amin'ny sary toy ny tsiky no tena manasa. Ny toro-hevitra dia ny tsy ho any amin'ny "selfie" tifitra rehefa miezaka ny cheesy. Koa, tsy ho any amin'ny vondrona tifitra araka ny ho very eo amin'ny sary. Izao torohevitra izao ny lehibe mandeha profil sary. Izaho koa manoro hevitra ny mampakatra mihoatra ny iray sary. Ao ny hanaovana ilay fandidiana sary, misalasala vondrona manampy tifitra, PET tifitra, sns. Misy teny malaza izay mandeha "ny sary dia teny sarobidy arivo" ka aoka ny sary hanao ny resaka.
Anao Section - Raha ny mombamomba ny sary dia zava-dehibe ny aterineto nilaina mampiaraka ny mombamomba, ny votoatiny dia manana anjara lehibe ihany koa. Alohan'ny sonia-ho misy mampiaraka toerana, fanaovana lisitra ny fialam-boly, mahaliana, hery, ary ny fahalemena. Indray mandeha izany lisitra feno, mifidy ny zavatra manan-danja indrindra izay vonona ny hizara. Ataovy azo antoka ianao hamelabelatra eo amin'ny fialam-boly sy ny zavatra mahaliana toy ny ho tianao ny ho vadiny mantsy izy mba hizara ny sasany amin'izy ireo. Koa, dia ahitana ny fomba tena mandany ny andro izao mihitsy no hanome ny hevitra ho vadiny mantsy izy mba hahita raha toa ka mifanaraka. Farany ary ny tena zava-dehibe, manao antoka fa 100% marina. Tsy misy manao ny marina, dia tsy hahita ny fanahinao vady.
Izay tianao amin'ny A namana Section - Na ny mampiaraka ianao sonia-toerana ho manana ity fizarana ity na tsia, Tena mila anao hampiditra izany ao amin'ny mombamomba. Eritrereto izay tena zava-dehibe aminao eo amin'ny mpiara-miasa. Soraty ny zavatra rehetra avy amin'ny toetra ireo soatoavina sy ireo fitondran-tena ny ohatra ny fomba te-handany ny fiainanao miaraka amin'ny namany. Aza ho kivy raha toa ka ny lisitra dia ho ela indray manomboka mamboatra ity fizarana ity, dia ahi-dratsy avy toetra izay tsy ho "manao izany, na handrava azy io". Ny soso-kevitro rehefa composant ity fizarana ity dia mifantoka amin'ny ho avy ny tenanao sy ny mpiara-miasa mitovy. Ny mombamomba azy amin'ny votoaty mavesatra loatra amin'ny tenanao ianao dia mampiseho fa feno fitiavan-tena, mifanohitra amin'izany ny profil izay dia manapariaka afa-po be loatra amin'ny zavatra mitady mety ho fanakanana ho vady ho avy. Koa, ho azo antoka porofo ianao Vakio. Misspellings tsy hahazo anao lavitra na mampiaraka amin'ny tranonkala. Farany, mandritra ny dingana rehetra amin'ny aterineto mampiaraka, ho azo antoka fa manana fahafinaretana! Izany zava-nitranga tokony ho-javatra, mampientam-po, sy ny sisa maro hafa.